हिप हप के हो ▷➡️ Postposmo | पोस्टपोस्ट
आइरिस गेमन | 23/05/2022 16:45 | संस्कृति
La हिप हप भनेको के हो भन्ने कुराको वरिपरि घुमेको कथा, यो धेरै रोचक छ र हामी सबैलाई यो थाहा हुनुपर्छ, विशेष गरी विभिन्न विद्यमान सांस्कृतिक आन्दोलनका प्रेमीहरूलाई। हिप हप एक सहरी सांस्कृतिक आन्दोलन हो जुन 70 को दशकमा देखा पर्‍यो र जुन भित्तिचित्र, नृत्य र संगीत जस्ता विभिन्न विषयहरू मिलेर बनेको छ।
Es एक वर्तमान जसले विभिन्न सडक संस्कृतिहरू समेट्छ, र त्यो नाच्न वा गाउन जान्ने भन्दा धेरै टाढा जान्छ। यो दमनको अवस्थाको प्रतिक्रियाको रूपमा जन्मिएको थियो जुन पलका अफ्रो-अमेरिकी नागरिकहरूले सहिरहेका थिए।
वर्षौंदेखिको यो आन्दोलन, ग्रहको सबै कुनाहरूमा लोकप्रिय र फैलिएको छ सबै उमेरका मानिसहरूलाई प्रभावित गर्दै। अर्को, यस प्रकाशनमा, हामी तपाईंलाई यस विधाको वरिपरिको सबै रहस्य र इतिहास बताउन जाँदैछौं।
1 हिप-हप के हो?
2 हिप हप संस्कृति को उत्पत्ति
3 हिप हप को विकास
4 हिप हप समाचार
5 हिप हप अग्रगामीहरू
5.1 डीजे कूल हरक
5.2 अफ्रिका बम्बाटा
5.3 ग्रान्डमास्टर फ्ल्यास
6 स्वर्ण युग
हिप-हप के हो?
हिप हप संगीत भन्दा धेरै धेरै छ, एक सहरी संस्कृति हो जसले संगीत, नृत्य, कला र फेसनलाई सँगै ल्याउँछ। यस संस्कृतिका चार आधारभूत स्तम्भहरू टर्नट्याब्लिज्म, र्याप, बी-बोइङ र भिजुअल आर्टहरू जस्तै भित्तिचित्रहरू हुन्। यी स्तम्भहरू हिप हप भित्र उपसंस्कृति भएका छन्।
यी चार फरक तत्वहरूको मिलनले संस्कृतिमा क्रान्ति ल्यायो किनकि यसलाई 70 को दशकमा चिनिन्थ्यो र यसलाई रोक्न नसकिने दरमा विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्न सफल भयो। यस संस्कृतिको प्रभावले नयाँ संगीत शैली, कला र मनोरञ्जनका नयाँ रूपहरू जन्माएको छ।वा, फेसन, नृत्य, शिक्षा, राजनीति, आदि सम्बन्धी समाचारहरू।
आज, हिप हप संस्कृति रहन्छ विश्वव्यापी घटना, जसको कारण कलात्मक अभिव्यक्तिका विभिन्न रूपहरू विकास भइरहेका छन्, जसले नयाँ पुस्तालाई प्रभाव पार्छ।
हिप हप संस्कृति को उत्पत्ति
यो नयाँ सांस्कृतिक आन्दोलन, न्यूयोर्क सहरमा ७० को दशकमा जन्मेको, विशेष गरी ब्रोंक्सको न्यूयोर्क छिमेकमा। यो आन्दोलनले बदलिँदो अर्थतन्त्र, राजनीति र औद्योगिक क्षेत्रको नकारात्मक असर देखाउन खोजेको हो ।
यो समय र विगतमा, न्यूयोर्क शहर निरन्तर आर्थिक पतनमा बाँचे। उत्पादन र निर्माणका कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको थियो । यी सबैको प्रत्यक्ष असर जनतामा परेको छ । यी सबै सामाजिक र आर्थिक समस्याहरूबाट बच्न गोरा मध्यम वर्गको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा उपनगरहरूमा भाग्न खोज्यो।
यी सबैले ए अफ्रिकी-अमेरिकी र ल्याटिनो समुदायहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रहरूमा बिग्रँदै। यस्तो खराब अवस्था थियो, जसले अपराध, हिंसा, गिरोह र गरिबीको वृद्धि बढ्यो।
यी सबै समस्या र धेरै कम्पनीहरु बन्द को परिणाम को रूप मा, त्यसबेलाका युवाहरु सडकमा उत्रिए व्याकुलता, मनोरञ्जन र आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमहरू खोज्दै।
यो हो यो नयाँ सहरी संस्कृतिको सुरुवात बिन्दु, छिमेकमा परित्याग भवनहरूमा आयोजित पार्टीहरू वा कार पार्कहरूमा। यी पार्टीहरू, हिप हप संस्कृतिको जग चिन्ह लगाउने व्यक्तिहरू थिए, यी समुदायहरूको पक्षमा परित्याग, वञ्चितता र क्रोधको भावनाद्वारा संचालित नयाँ युगको उदय भइरहेको थियो।
सन् 1520 मा, सेडविक एभिन्यू कन्डोमिनियममा जब डीजेहरू थिए तिनीहरूले आत्मा र फंक जस्ता विभिन्न आवाजहरू प्रयोग गर्न थाले। थप रूपमा, तिनीहरूले यी नयाँ लयहरूलाई शारीरिक क्षमताहरूसँग कसरी एकता गर्ने भनेर अनुसन्धान गर्न थाल्छन्।
हिप हप को विकास
धेरै वर्ष पछि, 1980 मा हिप हप को शहरी संस्कृति टेबल मा कडा हिट र अन्तर्राष्ट्रियकरण। हामीले कुरा गरिरहेको समयमा उत्पादन गरिएका सबै सङ्गीतहरू रोल्यान्ड 808 र Oberheim DMX ड्रम मेसिनहरूद्वारा प्रदान गरिएको धेरै विशेषतापूर्ण ध्वनि थियो।
यो नयाँ सांस्कृतिक आन्दोलनको उदय सुरु हुन्छ, विश्वभर नयाँ सीमानाहरू खोल्छ, जसको कारण हो ज्ञात संगीत दृश्यमा नयाँ व्यक्तित्वहरू देखा पर्न थाल्छन् जस्तै जर्मनी, जापान, फ्रान्स, आदि संसारका विभिन्न भागहरूमा बी-केटाहरू।
शहरमा जहाँ हिप हप पहिलो पटक देखा पर्‍यो, न्यूयोर्कमा, चार वर्ष पछि नयाँ विद्यालय जुन थप न्यूनतम तरिकामा लय प्रयोग गरेर विशेषता थियो। लय बनाउने यो नयाँ तरिका रक विधाको सङ्गीत र र्यापरहरूले लेखेका गीतहरूबाट प्रभावित भएको थियो, जसले शक्तिशाली सन्देशहरू र प्रतिशोधात्मक सामग्रीहरू लन्च गर्यो।
हिप हप समाचार
९० को दशकको अन्त्यमा, विभिन्न संगीत शैलीहरूद्वारा प्रभावित यस शहरी आन्दोलनमा विभिन्न शैलीहरू उत्पन्न हुन्छन्। समय बढ्दै जाँदा, हिप हपले नयाँ झट्का भोग्छ जसले यस संगीत शैलीको बिक्री घटाउँछ, तर वर्षमा 2010, अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा ठूलो शक्ति संग फेरि पुन: देखा पर्यो।
यो स्पष्ट छ कि यस शहरी संस्कृति वरपरका सबै चीजहरू वर्षौंको दौडान लगातार विकसित भएको छ, यसलाई बनाउँदै। नयाँ उपविधाहरू देखा पर्दछ जस्तै ट्र्याप, हाल उच्च उत्पादन, वा मम्बल र्याप।
हिप हप अग्रगामीहरू
ब्रोन्क्स र हार्लेमको छिमेकमा यसको शुरुवातदेखि, हिप हपको संस्कृति विश्वका विभिन्न संस्कृति र ठाउँहरू मार्फत विकसित र फैलिएको छ। तिनीहरू धेरै छन् महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, जसले हिप हपको संसारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरे। केहि सबैभन्दा उल्लेखनीय डीजे कूल हर्क, अफ्रिका बम्बाटा र ग्रैंडमास्टर फ्ल्यास थिए।
यो सांस्कृतिक आन्दोलनमा सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरू मध्ये एक हो जमैकन आप्रवासी जो हिप हप को संस्थापक पिता मानिन्छ। 1973 मा, उनी र उनकी बहिनीले उनीहरूको अपार्टमेन्ट भवनमा ब्याक टु स्कूल जाम आयोजना गरेर इतिहास रचे।
साथै, यो थियो चालक र एक जसले ब्रेकबिट प्रविधिको परिचय दियो। एक शब्द, इलेक्ट्रोनिक संगीतको विभिन्न उपविधाहरू वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन प्रचलित 4/4 बाहेक अन्य तालबद्ध ढाँचाहरू प्रयोग गरेर विशेषता हुन्छ।
डीजे कूल हर्क, फङ्क वा सोल जस्ता सांगीतिक विधाहरू टक्कर खण्डहरूसँग मिलाउनेछ टर्नटेबलको एक जोडी प्रयोग गर्दै। कुक हर्क आफैंले यस प्रविधिलाई ब्रेकबिट जुगलिंग भन्नेछन्, जसले उनलाई यस शहरी आन्दोलनको संगीतको उदयमा छिट्टै अग्रगामीहरू मध्ये एक बनायो।
साथै, थियो बोली लय र puns को विकास संग धेरै गर्न, जो MC द्वारा खेलेका थिए। गायनको यो शैलीलाई र्यापको पहिलो उपस्थिति भनेर चिनिन्छ, टोस्टिङको जमैकन परम्पराबाट प्रेरित, अर्थात्, लयमा बोल्ने वा गाउने।
द गडफादरको रूपमा पनि चिनिन्छ, अफ्रिका बम्बाटा हिप हपको इतिहासमा ध्यान दिनु पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो। संगीत निर्माता र DJ, जसले 70 को दशकमा ब्रोंक्समा पार्टीहरू आयोजना गर्थे र जसले पनि म धेरै युवाहरूलाई गिरोह, हिंसा, हतियार र लागूपदार्थबाट टाढा जान मद्दत गर्छु.
को संस्थापक थिए युनिभर्सल जुलु राष्ट्र, शान्ति र एकताको आन्दोलनको रूपमा संगीतमा समर्पित संस्था। यस संस्थाका युवाहरूलाई डीजे, र्‍यापर, भिजुअल आर्टका सृष्टिकर्ता र ब्रेकडान्सरसमेत बन्न सिकाइएको थियो। समय पछि, यी चार तत्वहरूलाई हिप हपको चार आधारभूत स्तम्भको रूपमा औंल्याइयो।
La गीत, ग्रह रक अफ्रिका बम्बाटा र सोल सोनिक द्वारा जारी गरिएको थियो सबैभन्दा प्रारम्भिक र सबैभन्दा प्रभावशाली मध्ये एक यो शैली 1982 मा।
न्यूयोर्कमा हिप हप संस्कृतिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्रहरू मध्ये अर्को। ग्रान्डमास्टर फ्ल्यास, थियो आफ्नो दिशा सार्न रेकर्ड प्रयोग र हेरफेर गर्न पहिलो DJअगाडि, पछाडि वा बायाँ। साथै, उनी त्यस समयमा नयाँ डीजे प्रविधिहरू जस्तै कट, पंच, स्क्र्याचिङ र ब्याकस्पिन सिर्जना गर्नका लागि परिचित छन्।
एक हिप हप युगमा सबैभन्दा प्रभावशाली समूह, ग्रान्डमास्टर फ्ल्यास र द फ्युरियस फाइभ 1976 मा। तिनीहरूले जनतालाई एक अद्वितीय सांगीतिक शैली प्रस्ताव गरे, विभिन्न र्यापरहरू बीच गीतहरू आदानप्रदान गर्दै र तिनीहरूलाई ग्रान्डमास्टर फ्ल्यासको डीजे प्रविधिहरूसँग जोडिएको थियो।
यो आंकडा हामीले भर्खरै देखेका सबै चीजहरूको लागि मात्र होइन तर संसारभरि परिचित छ विनाइलहरू हेरफेर गर्न हात, खुट्टा, कुहिनो र विभिन्न वस्तुहरू प्रयोग गर्नुहोस् जससँग उनले खेले ।
समूहको गीत "द मेसेज" सबैभन्दा प्रख्यात थियो र यसले र्यापलाई नयाँ सहरी विधाको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्‍यो र र्यापरहरूलाई पहिलो पटक उच्चतम बिन्दुमा पुर्‍यायो। सन् २००७ मा, ग्राण्डमास्टर फ्ल्यास र द फ्युरियस फाइभ समूहले इतिहास रचे रक एण्ड रोल हल अफ फेममा सम्मिलित हुने पहिलो हिप हप समूह बनेको छ।
1980 र 1990 को बीचमा, हिप हपले धेरै बल प्राप्त गर्यो र विभिन्न शहरहरूमा अधिक र अधिक फेला पार्न सकिन्छ। यो युग जुन हामी कुरा गर्दैछौं हिप हपको स्वर्ण युग भनिन्छ विविधता, प्रभाव, नवीनता र पूर्ण सफलतालाई जन्म दिने यस शहरी आन्दोलनको विस्फोटलाई चिन्ह लगाइयो।
त्यस समयका धेरै रेकर्ड लेबलहरू देखे हिप हप बढ्दो प्रवृत्ति र शर्तको रूपमा आन्दोलनको लागि धेरै पैसा। विभिन्न स्थानीय रेडियो स्टेशनहरु द्वारा उत्पन्न मांग को कम गर्न को लागी, एक त्वरित दर मा बजार मा रेकर्ड शुरू गरियो।
यो संस्कृति बढ्दै जाँदा र लोकप्रिय हुँदै जान्छ, हिप हपका नयाँ दृश्यहरू र शैलीहरू उदाइरहेका छन्, यद्यपि यो अझै प्रयोगात्मक थियो। तर धेरै हिप हप उत्पादकहरूले थप उन्नत सामग्री बनाए जसले धेरै उच्च स्तरको तालहरू सिर्जना गर्न नेतृत्व गर्यो।
यो मा स्वर्ण युग, नमूना संगीतको प्रयोग विशेषता थियो, अर्थात्, संगीत ट्र्याकको नमूना टुक्राहरू निकालिएको थियो र नयाँ सिर्जना गर्न प्रयोग गरियो। उही प्रतिलिपि अधिकार आज अवस्थित थिएन, त्यसैले कलाकारहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता थियो।
यो नयाँ आन्दोलनलाई संगीत मात्र नभई यो फेसनसँग पनि जोडिएको थियो जसले आफ्नै शैलीको कपडा, सामान, जुत्ता आदिलाई एकसाथ ल्यायो। यी सबै आफैलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम बन्यो।
तपाईंले देख्न सक्नुहुने रूपमा, हिप हपको संस्कृतिको वरिपरिको इतिहास आकर्षक र प्रतीकात्मक र महत्त्वपूर्ण पात्रहरूले भरिएको छ। वर्षौंको दौडान, यस संस्कृतिले विभिन्न परिवर्तनहरू र विकासहरू अनुभव गरेको छ जसले यसलाई आजको जस्तो बनाइदिएको छ। ब्रोन्क्सको छिमेकबाट विश्वव्यापी घटनासम्म।
लेखको पूर्ण मार्ग: पोस्टपोस्ट » संस्कृति » हिप हप के हो
इजिप्ट कहाँ छ; इतिहास र जिज्ञासाहरू